Vinicious Iyo Depay Oo Wacdarro Ka Dhigaya “La Liga-ha Liita” – Garsoore Sports
Vinicious Iyo Depay…
Vinicious Iyo Depay Oo Wacdarro Ka Dhigaya “La Liga-ha Liita”
Horyaalka heerka 1aad ee dalka Spain ayaa ku dhibtoon kara inuu xiiso yeesho xilli ciyaareedkan, iyadoo aysan heysanin awood xiddig oo aad u heer sarreeysa taasoo ay dheertahay ciyaaro caajis ah, balse labo ciyaaryahan ayaa ka sara maray heerarka kaddib markii ay soo bandhigeen tayadooda aadka u sarreeysa iyagoo kooxahooda natiijo wanaagsan u horseeday todobaadkan.
Toddobaad dhammaadka ee isku-aadka La Liga, waxay ku qaadatay laba ciyaartoy iyo laba naadi oo xifiiltama inay sameeyaan dedaal dheeraad ah si tartanku ay ugu helaan madadaalo dhab ah.
Vinicius Junior ayaa kasoo kacay kursiga kaydka wuxuuna dhaliyay laba gool si uu u soo nooleeyo kooxdiisa Real Madrid kulankii ay barbaraha 3-3 la galeen Levante – oo ah koox dhab ahaantii xiiso leh daawashadeeda, weerar leh, oo ciyaarta madaxa u rogtay bilowgii qeybtii labaad. Kooxda Paco Lopez, oo ka duwan kuwa kale oo badan oo ku jira heerkan 1aad ee Spain ayaa ku weeraraya cabsi la’aan xitaa haddii aad kamid tahay kooxaha ugu waaweyn caalamka balse markan waa horyaalka.
Waxaa la dhihi karaa waxay ahayd ciyaartii isbuuca, ma ahan kaliya La Liga laakiin guud ahaan horyaalada ugu waaweyn Yurub. Wuxuu ahaa kulan xiiso weyn leh, aadna uga wanaagsan sidii hore.
Kaddib markii kubbad taabasho ah uu Gareth Bale Madrid hoggaanka ugu dhiibay qeybtii hore, Levante ayaa soo baxday iyadoo karkaraysa. Roger Marti iyo Jose Campana ayaa shabaqa soo taabtay, iyagoo ka caawiyay kooxda xeebta bari inay noqoto kooxdii ugu horreysay ee La Liga ka dhalisa laba gool wareegan. Natiijooyinka ciyaar kasta oo kale ayaa loo akhriyaa sida koodhka binary; 1-0, 0-0 ama 1-1 waxay noqotay 10 gool sagaal kulan oo la cayaaray.
Dhanka kale, Barbarro 1-1 ah oo ay Barcelona la gashay Athletic Club habeenimadii Sabtida ayaa ahayd kulanka kale ee xiisaha badnaa ee wareegii ugu dambeeyay ee La Liga.
Kooxda Marcelino ayaa hoggaanka u qabatay Inigo Martinez daqiiqadii 50-aad ee ciyaarta kubbad madax aheyd, laakiin Memphis Depay ayaa goolkiisii ​​ugu horeeyay u dhaliyay Barcelona si ay u barbareeyaan, isagoo ku laaday geeska biddix ee kore.
Xiddiga reer Holland ayaa ah ciyaaryahan kale oo wacdarro ka dhigay kulamadii todobaadka. Waxa uu awood u leeyahay inuu muujiyo shaqsiyadiisa cayaareed, waa halis-qaate wuxuuna leeyahay kibir uu ku tijaabiyo waxyaabaha aysan ciyaartoyda kale sameyneyn. Ciyaartiisii ​​ugu horreysay, kulankii Real Sociedad, wuxuu isku dayay 40-yaardi inuu jaf ka qaado iyo taasoo mararka qaar qaab-cayaareedkiisa dadka soo xasuusisa xilligii Neymar ee Barca.
Laacibka reer Brazil ayaa la tabay tan iyo markii uu u dhaqaaqay Paris Saint-Germain sannadkii 2017kii, haatanna Lionel Messi ayaa u raacay inuu kula biiro, halka Cristiano Ronaldo uu u dhaqaaqay Juventus sannadkii 2018 isagoo ka yimid Real Madrid. Iyada oo uu wehliyo Sergio Ramos oo u dhaaqay PSG iyo Raphael Varane oo ku biiray Manchester United, dhammaanna waxay kamid ahaayeen xiddigaha tayada sare u yeeli jiray horyaalka La Liga.
Qaar ka mid ah magacyada xiddigaha waaweeyn ee soo haray ayaa hoos uga dhacay heerkoodii ugu sarreeyay sida Eden Hazard, Gareth Bale, Philippe Coutinho iyo Antoine Griezmann. sidoo kale xiddigihii da’yarta horyaalka qaar kamid ah kuwoodii ugu fiicnaa ayaa ka tegay; Ferran Torres oo ku biiray Manchester City xagaagii hore, Bryan Gil oo ku biiray Tottenham sannadkan, iyo kuwo kale.
Way adkaan kartaa in la daawado, haddii xiddigaha Vinicius iyo Memphis aysan dejin tusaale cusub, oo tamartooda kinetigu noqoto mid caadi ah, halkii ay ahayd wax laga digtoonaado.
Chelsea Oo Weli Daba-taagan Kounde Iyadoo West Ham Ay Soo Dalbatay Zouma
Gary Neville Oo Ku Booriyay United Inay Iska Iibiyaan 4 Xiddig Soona Iibsadaan Harry Kane